भविशाको डायरी :: भानु दाहाल :: Setopati
एक हप्तापछि एकदिन रंगिन पेपरले र्याप गरिएको गिफ्ट जस्तै देखिने बट्टा प्रेक्षाले मेरो टेबलमा ल्याएर राखिदिई। बाहिरपट्टि रातो मसीले ठूलो अक्षरमा मेरो नाम लेखिएको थियो। एकछेउमा सानो अक्षरमा छड्के पारेर लेखिएको थियो– अत्यन्तै गोप्य।
पठाउनेको नाम कतै छ कि भनेर ओल्टाइपल्टाइ हेरेँ। कतै केही लेखिएको थिएन।
‘कसले ल्यायो यो ?’ अगाडि उभिरहेकी प्रेक्षातिर हेर्दै सोधेँ।
‘थाहा छैन। हजुरलाई दिनु भनेर रिसेप्सनमा छोडेको रहेछ।’
प्रेक्षा निस्किएपछि र्याप गरेको पेपर खोलेँ। भित्र सानो सिन्दुरको बट्टा, एक लुङ पोते र एउटा रातो डायरी। डायरीको बाहिरपट्टि रातो मसीले लेखिएको थियो– तिम्रो सम्झनामा।
त्यो भन्दा तलतिर थियो रातो गुलाबको फूल र उनको नाम– भविशा।
आश्चर्य त त्यतिबेला लाग्यो जब डायरी सँगै सिन्दुर र पोते पनि देखेँ। सिन्दुर पोते मलाई पठाउनुको अर्थ के ? मैले कहिल्यै पनि उनलाई सिन्दुर पोते दिएको थिइनँ। कतै मेरो नामको सिन्दुर र पोते उनले लगाएकी त थिइनन् ? यदि थियो भने मलाई किन कहिल्यै थाहा दिइनन्?
म एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नै प्रश्नको अन्धकार सुरुङभित्र फसेँ। त्यँहाबाट निस्किने आशा जीवितै राख्ने एउटै मात्र चिज थियो, उनले लेखेको डायरी।
सायद अब यसैले खोल्नेछ उनको जीवनको मैले नदेखेको कथा।
तिमीसँग बसुन्जेल डायरी लेख्न कहिल्यै आवश्यक ठानिनँ। जब छुट्टियौं लेख्नै पर्ने आवश्यकता महशुस गरेँ। मेरो कथा मसँगै नमरोस् भन्ने एक मात्र उद्धेश्य हो यो लेख्नुको। त्यसैले कोशिस गरेको छु।
कुनैदिन यो डायरी तिमीले पढ्न पायौ भने मैले यो लेख्नुको सार्थकता हुनेछ। म प्रार्थना गर्छु, यो तिम्रो हातमा परोस्!
त्यो दिन पत्रिकामा तिम्रो आर्टिकल ‘लिभिङ टुगेदर...’ पढेपछि मलाई त्यो नयाँ कन्सेप्टले निक्कै आर्कषित गर्‍यो। दोहोराएरै पढेँ, तिम्रो लेखाइले मलाई तानिसकेको थियो। रातो टि–सर्ट, नकोरेको कपाल, चम्किलो आँखा, बिर्रर दाह्री उम्रिएको तिम्रो शालिन अनुहारवाला त्यहाँ छापिएको तस्वीरले मलाई झन् बढी आकर्षित गर्‍यो।
तिमीलाई थाहा छ त्यो फोटो मैले कति पटक हेरेँ ? अनगिन्ती। यति पटक भन्ने त मलाई नै थाहा छैन, तिमीलाई त झन् कसरी थाहा होस् ! त्यसपछि हो तिमीलाई प्रत्यक्ष भेट्ने तीव्र इच्छा जागेको।
आर्टिकलको अन्तिममा तिम्रो इमेल ठेगाना थियो। इमेल लेख्दै मेट्दै गरेँ धेरै पटक तर पठाउने आँट आएन।
आजसम्म कसैलाई भेट्ने प्रस्ताव नराखेकी म, तिमीलाई चाहीँ कसरी सक्थेँ र? एक मनले भन्थ्यो केटी मान्छे भएर भेट्ने प्रस्ताव राख्दा उत्ताउली रैछ पो भन्ठान्ने हो कि ? फेरी अर्को मनले भन्थ्यो भेटेर गफै गर्नु त के नराम्रो हो र? यस्तै दोमन गर्दागर्दै दुई दिन बित्यो।
अन्ततः हिम्मत गरेरै तिमीलाई मेल गरेँ। रिप्लाई दिएर भेट्छु भन्यौ, मेरो खुसीको सिमै रहेन। अचम्म ! म तिमीप्रति किन यति धेरै आर्कर्षित भएँ ? आफैंलाई थाहा छैन।
म झल्झली सम्झिरहेको छु त्यो कफी सपको पहिलो भेट।
गोरो चकलेटी अनुहार, झुस्स दाह्री, जिङ्रिङ्ग कपाल, पातलो अग्लो ज्यानमा नीलो टि–सर्ट र डार्क ब्लु जिन्स्मा मुसुमुस मुस्कुराउँदै मलाई कुरिरहेको तिमी।
तिम्रो पर्सनालिटी मात्र होइन तिम्रो व्यवहार पनि उस्तै राम्रो रहेछ। पहिलो भेटमै मलाई फिदा बनायौ। झन् तिम्रो त्यो इनोसेन्ट अनुहारको वर्णन त खै म कसरी गरुँ?
अब मलाई तिम्रो लेख मात्र होइन, तिमी नै मन परिसकेको थियो। त्यही भेटले तिमी र मलाई जोडिदियो।
बिहानदेखि बेलुकासम्म कहिले कल, कहिले मेसेज गरेर तिमीसँग बोलिरहन मन लाग्थ्यो।
मात्रै एक घन्टा पनि तिमी कुनै जानकारी बिना अफलाइन भयौ भने यता म बेचैन हुन्थेँ। कहिलेकाहीँ त सोच्थेँ, म किन यति धेरै क्रेजी भएकी! के मलाई जस्तै उसलाई पनि हुन्छ?
कतै मेरो यो एकोहोरो प्रेम त होइन ? तर होइन, तिम्रो निश्चल प्रेममाथि मैलै शंका गरेको पटक्कै होइन।
म बुझ्थेँ, तिमी व्यक्त गर्दैनौ थियौ तर बेहद प्रेम गर्थ्यौ। अँ साच्चि! तिमीले भनेको मलाई याद छ नि– प्रेम देखाउने कुरा होइन, महशुस गराउने कुरा हो। हो, हो...कति गफ आउँछ है तिमीलाई ? बद्मास..!
तिमीसँग भेटेपछि एक वर्ष जेनतेन होस्टेलमा बिताएँ। अनि त होस्टेलमा बस्न पनि मन लाग्न छोड्यो। हरेक साँझ तिमीसँगै परोस्, हरेक बिहान तिमीसँग उदाओस् भन्ने लाग्न थाल्यो।
म हरेक पल तिमीसँगै हुन चाहन्थेँ। त्यसैले जिद्धी गरेकी थिएँ सँगै बसौं भनेर। तिमी अनेक बहाना गरेर टार्न खोज्थ्यौ।
आखिर जित प्रेम कै थियो, हामी लिभिङ टुगेदरमा बस्यौँ। सँगै बिताएका ती तीन वर्ष मलाई तीन महिना जस्तो लागिरहेको छ।
ती बसाइँको मीठा पलहरू अहिले पनि मेरो मानसपटलमा ताजै छन्। एकएक पलहरू यहाँ लेख्न मन छ। तर यो सानो डायरीमा कति नै अटाउला र!
हामी दुनियाँको नजरमा अविवाहित भए पनि हाम्रो नजरमा हामी विवाहित जस्तै थियौं।
के फरक थियो र विवाहित जोडी र हामीमा ? तिम्रो अफिस, साथीभाइहरू माझ मलाई श्रीमती नै भनेर चिनायौ। तिमीले त्यसो भनिरहँदा मभित्र खुसीको संचार यति हुन्थ्यो कि त्यो म शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। मलाई तिमीप्रति गुनासो छ।
यस्ता कुराहरू अक्षरमा व्यक्त गर्न कहिल्यै सिकाएनौ। किन सिकाएनौ? भन त!
‘सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन...’ तारादेवीले गाएकी यी गीतका हरफहरू कसैले मेरै लागि लेखिदिएको रहेछ झै लाग्छ आजकाल। मेरो अब्रोडबाट मास्टर्स गर्ने जिद्दी रूपी हुरीले एकाएक हाम्रो सम्बन्ध उडाएर आँधीपछि फुंग उडेको झुप्रे बस्ती जस्तै बनाइदियो।
मलाई थाहा थियो तिमी आफ्नो अडानमा टसमस गर्नेवाला होइनौ। तै कतै मेरो रहरमा साथ दिन्छौ कि भन्ने झिनो आशाले कहिले फकाउँथें, कहिले घुक्र्याउँथें। म अलि जिद्धी नै छु।
बाआमाको एक्लो सन्तान। मलाई अपुग के नै थियो र! म पुलपुलिएर हुर्किएकी थिएँ। जे चाहन्छु त्यो पाउनै पर्छ भन्ने मभित्र हुर्किएको अहम् पनि एउटा कारण हो, जसले हाम्रो सम्बन्ध नदीको दुई किनारा बनाइदियो।
त्यो रात, तिमीले अन्तिम निर्णय सुनाएका तिम्रा ती शब्दहरूले मेरो मुटुमा वाण रोपे झैं भयो। म माथि आकाश खसे झैं, मैले टेकेको धर्ती भासिए झैं लाग्यो।
सबैतिर अन्धकार देखेँ। बाआमा छोडेर तिमीलाई नै संसार मानेर बसेकी थिएँ।
अब तिम्रो साथ पनि नपाएपछि एक्लै भए पनि आफ्नो सपना पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्यो। मनमा त संसार नै त्यागिदिउँ कि जस्तो पनि नलागेको होइन । तर चाउरी पर्न थालेका बाआमाको अनुहार सम्झिएर रोकिन्थें।
वाथरूम छिरेर घण्टौं रोएँ। कतै फकाउन पो आउँछौ कि ! साथ दिन्छु पो भनिहाल्छौ कि भन्ने झिनो आस मरिसकेको थिएन। अहँ, तिमी आएनौ। फर्किएर बेडमा आएँ।
तिमी एकछेउमा पिठ्यू फर्काएर सुतिदियौ। पटकपटक कोल्टे फेर्दै निस्सार त्यो रातमा कतै अंगालो मारेर फकाउँछौ कि भन्ने आस लागिरह्यो।
मनमा लागेको थियो एकपटक अंगालोस् र भनोस्– भवि! तिमी र मेरो सम्बन्ध भन्दा ठूलो अब्रोडको मास्टर्स होइन। आई कान्ट लिभ विदाउट यु! तर भनेनौ।
पीडा तिमीलाई पनि थियो। थाहा पाइरहेकी थिएँ, तिमी पनि निदाउन सकेको थिएनौ। तर हामीभित्र रहेको जिद्धीपनको अगाडि मायाको केही जोड चलेन।
एक मनले सोच्थेँ– होस् यो विदेश जाने चक्कर छोड्दिउँ। नेपालबाटै मास्टर्स गरे पनि भैहाल्छ नि। पढाइ मात्रै सबैथोक पनि त होइन।
मन परेको, माया गरेको मान्छेसँग जिन्दगी बिताउन पाउनु पनि त जीवनको उपलब्धि नै हो।
फेरी अर्को मनले सोच्थेँ– केही पाउन केही गुमाउनै पर्छ। म आफ्नो सपनालाई उसको कारण किन तिलान्जली दिउँ? मेरा बाआमाको सपना पनि त त्यही हो।
उसको लागि बाआमा त त्यागेँ अब उहाँहरूको सपना पनि तुहाइदिनु? मैले त्यसरी बस्ने एकल निर्णय लिएर धोका दिइसकेको थिएँ। अझै कति धोका दिउँ बाआमालाई? उफ् ! सोच्दासोच्दै छर्लङ्गै रात बितेछ।
ब्लाङ्केट हटाउँदै घडी हेरेँ, बिहानको नौ बजिसकेछ। तिमी अफिसको लागि तयार भैसकेको थियौ। जुत्ताको ट्वाक ट्वाक आवाज सुनेर म दौडिदै भर्याङसम्म पुगेर हेरेँ।
तिमी केही सम्झिए झै गरेर टक्क रोकियौ अनि गयौ। तर पछाडि फर्किएर मलाई हेर्न जरुरी ठानेनौ। तिमी ओझेल परेपछि एकाएक मेरो मुटुको धड्कन बढ्न थाल्यो। भक्कानो फुटेर आयो।
ढोकामा चुकुल लगाएँ। रोएँ, कराएँ, चिच्याएँ। भित्तामा भएका तिम्रो र मेरा तस्विरसँग घण्टौं बात मारेँ। त्यो ठाउँ, ती सबै दृश्य मेरा लागि त्यो दिनसम्मका मात्रै थिए।
दिउँसोको एक बजिसकेको थियो। आफ्नो कपडा प्याक गरेँ। असरल्ल छोडेका तिम्रा कपडा मिलाएर दराजमा राखिदिएँ। सामानहरू मिलाइदिएँ। कोठा किचेन सफा गरेँ। हिँड्न तयार भएँ अनि अन्तिममा तिमीलाई टेक्स्ट गरेँ।
मलाई आशा थियो तिमीले तुरुन्तै कल गर्नेछौ। नभए पनि एउटा लामो टेक्स्ट गरेर मलाई नजाउ भन्ने छौ। वा, म आउँछु अनि मात्र जाउ भन्ने छौ। कम्तीमा मलाई रोक्ने छौ भन्ने आशा राखेर हातमै मोबाइल राखेर आधा घण्टा कुरेँ।
अहँ, मेरो मेसेजको रेस्पोन्स आएन। मनले पूरै हरेस खायो। चाबी लगाउनु अगाडि घरभरिका सबै सामानको स्पर्श गरेँ, चुमेँ र सबैसँग बिदा मागेर म सधैंको लागि रुँदै निस्किएँ।
एक सुट्केस कपडा र एक झोला किताब बोकेर टुप्लुक्क छोरी घर पुग्दा बाआमा औधी खुसी देखिनु हुन्थ्यो। पढाइ सकेर छोरी होस्टेलबाट घर फर्की भन्ने बाआमाको बुझाइ गलत नै त थिएन।
तर म होस्टेलबाट नभई घरबाट माइत फर्किएकी थिएँ, फेरि कहिल्यै नजाने गरी। त्यति ठूल्ठूला निर्णय म एक्लै गरिरहेकी थिएँ।
बिचरा बाआमालाई केही थाहा छैन। मनमा त्यत्रो पीडा लुकाएर अगाडिको बाटो तय गर्न मलाई सजिलो थिएन। एकातिर आफ्नो सपना अर्कोतिर तिम्रो सम्झना। म धेरै रात निदाउनै सकिनँ।
यो शरीर टाढा भए पनि मन तिमी सँगै थियो भास्कर ! तिमीलाई नसम्झिएको कुनै पल नै थिएन। ममीले रायोको साग पकाउँदा होस् कि खसीको मासु, खान बस्दा तिम्रै याद आउँथ्यो।
उसलाई यो कति मन पथ्र्यो, एक्लै के खायो होला ? जब–जब तिमीलाई मनपर्ने कुरा किचेनमा पाक्थ्यो म यस्तै सोची बस्थेँ।
तर खै मभित्रको के कुराले तिमी सँगै बस्न दिएन मलाई नै थाहा छैन। आफ्नो रहर, बाआमाको सपना र तिम्रो माया बीचको त्रिकोणात्मक भूमरीमा परेर म आफ्नो जीवनबाटै कमजोर हुँदै गएको महशुस गर्थें।
एक दिन घरमा मेरो फूपू आउनुभयो। लण्डनमा व्यापार गरेर बस्ने आफ्नै देवरको छोराको बिहेको कुरा लिएर। उसैसँग मेरो बिहे गराइदिने ठूलै छलफल चल्यो। फूपूले केटाको गुणगान खुवै गाउनु भयो। बाआमा मख्ख परे।
औपचारिकता नै सही मलाई पनि सोधियो, फोटो पनि देखाइयो। तर मैले केही भनिनँ।
मौन बसेको देखेर म उसँग बिहे गर्न राजी भएको अर्थमा बुझेछन् सायद। परिवारमा खुसीको माहोल बन्यो। छोरीले अब्रोडबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको हेर्ने सपना पनि पूरा हुने भयो भन्ने लाग्यो होला।
कुराकानी कै बीचमा एकपटक निक्कै आँट गरेर बोलेँ, ‘म एक्लै स्टुडेण्ट भिसा अप्लाइ गर्छु। बिहे गर्नुपरे पढाइ सकिएपछि गरौंला।’
मलाई एक्लै विदेश जान नदिने बाबाको अडान अगाडि मेरो त्यो लुते प्रस्ताव के काम लाग्थ्यो र! त्यसपछि बाबाको लेक्चर सुरू भैहाल्यो अब मैले बोल्नुको अर्थ थिएन। म चुपचाप बसेँ। केटा विवाह गर्न नेपाल नै आएको रहेछ। एक दुई दिनमा भेट्ने कुरा तय भयो।
भेटेँ, केटा राम्रै थियो। उसले मन परायो। मैले हुन्छ पनि भनिनँ, हुँदैन पनि भनिनँ। मलाई थाहा थिएन मौन बस्नु भनेको हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। मेरो कति कुरामा तिमी मौन बस्थ्यौ। मलाई लाग्थ्यो त्यो तिमीलाई मन परेन। तर अर्थ त त्यस्तो नहुने रहेछ। मलाई के थाहा!
केटा फर्किहाल्नु पर्ने भएकोले एक हप्तैमा बिहे सक्ने सल्लाह भयो। भोलिपल्टैबाट विवाहको तयारी सुरू भयो। यता मेरो भने साँझ–बिहान होस् कि मध्यरात, तिम्रो फोटो हेरेर बात मार्नु दैनिकी बनेको थियो।
अन्जु पन्तले गाएको ‘माया एउटा सँग बिहे अर्को सँग...’ गीत मेरै लागि लेखिएको थियो झैं लाग्न थाल्यो। यो गीत कैयौं पटक सुनेँ।
हरेक शब्द मेरै जीवनसँग मेल खान्थे। एक्लै हुँदा होस् वा जग्यमा बेहुलासँग बसिरहेको क्षणमा होस्। तिम्रो अनुहार र यो गीत मानसपटलमा घुमिरहन्थे। चिच्चाएर जग्गेमै गाइदिउँ झैं लाग्थ्यो।
फेरि बाआमाको अनुहार सम्झिन्थेँ, आफ्नै रहर सम्झिन्थेँ। आफूले आफ्नै मनलाई सम्झाउनु बाहेक के नै उपाय थियो र ! त्यो जग्गेमा दनदनी बलेको आगोमा तिमीसँग साचेको कैयौं सपनाहरू मेरै आँखा अगाडि जलिरहेका थिए।
बिहेलगत्तै ऊ लण्डन फर्कियो। इम्पेरियल कलेज लण्डनमा मास्टर्स डिग्रीको लागि भिसा लाग्यो। अब मेरो गन्तव्य मोडियो लण्डनतिर। घरको काम गर्नु, पढ्नु र फुर्सद भएमा उसको व्यवसायमा सहयोग गर्नु मेरो दिनचर्या थियो। तर पढाइमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनै सकेन।
मेरो जीवनसँग एकाएक जोडिएको नयाँ मान्छे आत्मीय बन्न सकेन। नातामा मात्र हामी श्रीमान् श्रीमती थियौं, भावनात्मक रूपमा त्यो सम्बन्ध मौलाउन सकेन।
विदेशी रमझम, असीमित सुविधा अनि त्यहाँको दैनिकीले मेरो मन तान्न सकेन। सात समुन्द्रपारि पनि मलाई तिम्रा यादहरूले पछ्याउन छोडेनन्।
सपना थियो तिमीसँगै कुनै दिन समुन्द्री तटमा पुग्ने। समुन्द्री तटमा त म पुगेँ तर तिमी त्यहाँ थिएनौ। तिमी बिनाको समुन्द्र नै सुख्खा लाग्थ्यो मलाई।
तिम्रो यादहरूले मेरो मनमा यति जरा गाडेको रहेछ कि मलाई दिनप्रतिदिन गलाउँदै लगिरहेको थियो।
एक रात निन्द्रामा चिच्याएर बिस्ताराबाट कुद्ने हुँदा अगाडि रहेको दराजमा टाउको ठोक्किएर बेहोस भएछु। ब्यूझिँदा म हस्पिटलको बेडमा थिएँ। डाक्टरले उसलाई सम्झाउँदै थिए।
कुनै किसिमको स्ट्रेस पर्ने कुराहरू मेरो छेउमा नगरिदिन, शान्त वातावरण बनाइदिन डाक्टरको अनुरोध थियो। डिप्रेसनको रिपोर्ट र काउन्सेलिङको लागि लेखिएको रिफर नोट बोकेर मेरो श्रीमान् नजिकै आएर मेरो अनुहार नियालेर हेरे।
मसँग बिहे गरेर पछुताएको भाव उनको अनुहारमा सल्बलाई रहेको छ भन्ने म प्रष्ट बुझ्थेँ।
मेरा आँखा रसाए। मन भारी भएर आयो। आत्मग्लानीले म तड्पिएँ। आफ्नो सपनाको स्वार्थमा अर्को एक निर्दोष मान्छेमाथि जानीजानी गरेको अपराध सम्झेर आफैंप्रति घृणा जाग्यो।
कुनै दिन पनि एक वचन उसले मेरो डिप्रेसनको कारण सोधेन। उसको मायामा कुनै कमी थिएन।
तर मलाई दिनप्रति दिन डिप्रेसनले गाज्न थाल्यो। औषधि सेवन नगरी निदाउन छोडेँ। पढाइ छोडेँ, झन् उसको काममा सहयोग गर्ने त कुरै थिएन। म घरको चार पर्खालभित्र सीमित भएँ।
जेनतेन त्यसैगरी दुई वर्ष बित्यो। बाआमाको यादले पनि साह्रै सताउन थालेपछि एक महिनाको लागि नेपाल फर्किने निर्णय गरेँ।
रिफ्रेस हुन्छे भन्ठानेर होला उसले पनि केही समयलाई नेपाल जान सुझाव दिइरहेको थियो। गएको तीन वर्षपछि म नेपाल आएँ।
मलाई डिप्रेसन भएको मेरो माइती पक्षलाई थाहा दिइएको थिएन। बाआमाको अगाडि आफ्नो रोग लुकाउन म हरदम कोशिस गरिहन्थेँ। सबभन्दा गाह्रो त औषधि खान र लुकाउन थियो।
जतिबेलै सुतिरहन मन लाग्ने, खासै कोहीसँग बोल्न पनि मन नलाग्ने। घरबाट बाहिर निस्किन समेत मन नगरेको देखेर एकदिन त ममीले मुख खोलेरै सोधिस्यो, ‘तँ त डिप्रेसनमा छस् कि क्या हो नानी?’
मलाई त चिच्चाएर भन्न मन थियो, ‘हो ममी म डिप्रेस्ड छु।’ तर, त्यो हिम्मत मसँग बाँकी छैन ममी। सुस्तरी भनेँ, ‘छ्या, होइन। किन त्यस्तो सोचिसेको?’
नेपाल बस्दा काउन्सेलिङको लागि उताको सबै रिपोर्ट बोकेर आएको थिएँ। गोप्य रूपमा काउन्सेलिङको लागि गुगल सर्च गरेँ।
स्क्रिनमा हेर्दाहेर्दै मुटुको धड्कन तब एकाएक तीव्र भयो जब साइक्याट्रिक काउन्सेलरहरूको टप लिष्टमा तिम्रो फोटो देखेँ।
सफाचट गोरो अनुहार, पावरवाला सेतो चस्मा, हल्का फुलेको कपाल र रोयल ब्लु सुटभित्र सेतो सर्ट र रातो टाईको तिम्रो आकर्षक तस्वीरले मलाई तरङ्गित बनाइदियो।
तर, मलाई थाहा भएको तिम्रो नाम त्यहाँ थिएन। तिम्रो प्रोफाइल क्लिक गरेर सबै हेरेँ। आखिर तिमी नै थियौ मेरै भास्कर। खै ! मेरै पनि कसरी भनौं! मेरो भएको भए त मसँगै हुन्थ्यौ नि, होइन?
कास...सँगै भएको भए मेरो जीवनमा यस्तो दिन आउँदैन थियो कि!
मनमा स्मृतिहरू मडारिन थाले। भास्करको जीवनमा यति धेरै परिर्वतन आइसकेको रहेछ। सायद उसले बिहे पनि गर्यो होला।
उसको यादबाट मुक्ति पाउन सामाजिक संजालदेखि जोडिएका सबै ठाउँबाट उतिबेलै डिलिट गरको थिएँ।
तर खास डिलिट हुनुपर्ने मन मस्तिष्कबाट भने कहिल्यै भएन। त्यसैले त आज म यस्तो अकल्पनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छु।
गजब त के भने, म जुन समस्यासँग जुधिरहेकी छु ऊ त्यसैको विशेषज्ञ भएर बसेको रहेछ। नियतिको यो कस्तो खेल? के म उसैकहाँ परामर्शको लागि पुग्नुपर्ने भो अब?
सुरूमा त त्यहाँ जान्न भन्ने सोचिरहेको थिएँ। जुन घाउबाट मुक्त हुन खोजिरहेको थिएँ फेरि त्यही घाउ किन कोट्याउनु?
तर अर्को मनले त्यसो भन्दैन थियो। भन्छन् नि जहाँ लडेको हो त्यहीँबाट उठ्नु पर्छ। समस्या जहाँबाट सृजना भयो त्यहीँबाट समाधान खोज्नु त झन् बुद्धिमानी हो नि।
यसो भनिरहँदा तिमीलाई लाग्यो होला मेरो समस्याको सारा दोष मैमाथि थोपरिरहेकी छे। त्यस्तो होइन भास्कर! कारणसँग तिमी जोडिन्छौ तर दोष तिम्रो होइन।
मैले तिमीलाई कहिल्यै दोष दिएको छैन। दोष हाम्रै नियतिको हो।
मध्ये रातको बाह्र बजेर पैतिस मिनेट गइसकेछ। रात सुनसान छ, तर मेरो मनमा आँधी चलिरहेकै छ। आ...जे सुकै होस्! एकपटक उसैलाई भेट्छु।
उसलाई देख्न, भेट्न मन लागिरहेको पनि छ, बाहना पनि त हुन्छ।
मैले परामर्शको लागि तिम्रोमा आउने निधो गरेँ। तिम्रो ‘आसेवन काउन्सेलिङ’ अफिसको फोन नम्बर नोट गरेर बेडमा पल्टिएँ।
काठमाडौं पनि निक्कै चिसो हुन थालेछ, लण्डनजस्तै। सडकमा हिँड्दा त त्यहाँ साँझको सिरेटोले मुटु कमाउँछ। यतिबेला लण्डनमा साँझ पर्यो, आयुषको घर फर्किने बेला पनि भएछ।
खाना बनाउन उसै त अल्छि छ, त्यहाँमाथि जाडो। रेष्टुराँतिर डिनर पो गर्दै छ कि! म नेपाल आएको यत्रो दिन बितिसक्यो, फोन, मेसेज केही गर्दैन। कस्तो मान्छे होला?
आफ्नी श्रीमतीको माया पनि लाग्दैन कि क्या हो ? केटा मान्छेको मन अलि रुखो नै हुन्छ भन्छन्। हुन त मैले पनि गरेकी छैन। म पनि उसैले पहिला गरोस् न भनेर कुरेकी छु।
अँ...भास्कर, बिहान उठेर तिम्रो अफिसमा कल गरेँ। तिम्रो असिस्टेन्ट प्रेक्षाले पन्ध्र दिनपछिको अपोइन्टमेन्ट दिइन्। त्योभन्दा अगाडि नै डेट मिल्छ कि भनेर कोशिस नगरेको होइन तर मिलेन।
दुई हप्ता कुरेरै भए पनि म तिमीलाई भेट्न आतुर थिएँ। भेट नै हुँदैन भन्दा बरु वास्ता नहुने तर अब फलानो दिन भेट हुन्छ भन्ने भएपछि त्यो दिनसम्म कुर्न भने साह्रै सकस हुन्छ मलाई। दिन गनेर बस्ने बानी छ। तिमीलाई थाहै छ नि।
यही कुरामा तिमीले कति पटक गाली पनि गरेको थियौ। जति नै सकस भए पनि समय त आफ्नै गतिमा बग्ने हो बगि नै रहन्छ। अन्ततः भेट हुने दिन पनि आइपुग्यो।
शनिबारको दिन काठमाडौं अलि ढिलै उठ्छ। तर म सबेरै उठेँ। तिमीसँगको आठ बजेको अपोइन्टमेन्ट थियो। मन त्यसै फुरुङ्ग थियो। तीन वर्षपछि तिमीलाई भेट्दै थिएँ।
नढाँटी भन्छु, तिमीसँग छुट्टिएपछि म फेरि यति धेरै खुसी भएको आजै हो। अचानक भेट हुँदा तिम्रो रियाक्सन कस्तो होला है! कतै पूरै बदलिएको त छैनौ? आफैंसँग प्रश्न सोधेर आफैं मख्ख थिएँ।
तिमीलाई मनपर्ने सेतोमा नीलो बुट्टा भएको टप्समा नीलो लेगिज लगाएँ। धेरै मेकअप गरेको तिमीलाई मन पर्दैन थियो। हुन त मलाई पनि मन पदैन। हल्का मेकअप गरेर ठूलो ऐनामा घुमिघुमि आफ्नै शरीर हेरेँ। मान्छे त म राम्री हो नि– आफैं फुसफुसाएँ। आज आफ्नो शरीर आफैंलाई खुब मन परिरहेको थियो।
जब मन खुसी हुन्छ नि सारा संसार नै राम्रो देखिन्छ।
तिम्रो अफिस पुग्दा आठ बज्नै लागेको थियो। प्रेक्षाले लम्बेतान फारम भराएर, उताको रिपोर्ट समेत राखेर फाइल तयार गरेकी थिई। मलाई काउन्सेलिङ रूममा कुराएर ऊ फाइल बोकेर तिम्रो रूममा गई।
तिम्रो प्रतीक्षामा म घडीको सेकेण्ड सुई गनेर बसिरहेँ। मलाई खुसीले के गरौं र कसो गरौं भइरहेको थियो।
एक मनले त तिमीलाई भेट्ने बित्तिकै अंगालो मारेर धक फुकाएर रोई दिउँ जस्तो पनि लागिरहेको थियो। फेरि सोच्थेँ, उसको अगाडि किन दुःखी बन्नु।
मेरो पीडासँग उसलाई के मतलब? सम्बन्ध त उसै दिन टुंगिसकेको थियो।
म त यहाँ भास्कर होइन काउन्सेलर भेट्न कुरिरहकी छु। पिसाब लाग्ला जस्तो भयो, वाथरूम छिरेँ। अहँ... लागेन। फेरि आएर सोफामा थचक्क बसेँ।
सेकेण्ड, मिनेट हुँदै आधा घण्टा बित्यो तिमी आएनौ। आधा घण्टापछि प्रेक्षा आएर भनि, ‘सरी म्याम, सर इर्मजेन्सी मिटिङमा हुनुहुन्छ। टाइम लाग्छ। भोलि आठ बजेलाई टाइम दिनु भएको छ।’
यो सुनेर मलाई झनक्क रिस उठ्यो, ‘मैले पनि त दुई हप्ता अघिदेखि टाइम लिएको हो नि। मलाई धेरैबेर पर्दैन एक मिनेट भए पनि भेट्न दिनुस्।’
फेरि उसले नम्र हुँदै भनि, ‘सरी म्याम मिल्दैन।’
दौडिदै गएर तिम्रो ढोका खोलेर छिरौं जस्तो पनि लागेको थियो। तर अफिसमा अरु मान्छेको अगाडि त्यति गर्ने हिम्मत आएन। प्रेक्षाले उसको क्याविनमा ल्याएर कफी अफर गरी।
कफीसँगै आधा घण्टा गफ गर्यौं। हिजोआजको तिम्रो जिन्दगीबारे प्रेक्षाले सबै सुनाई। एकाएक ममा बेचैनी बढ्यो। आधा घण्टा बसेर म निराश हुँदै तिम्रो अफिसबाट निस्किएँ।
त्यस्तै मन लिएर जस्तो तीन वर्षअघि तिम्रो घरबाट निस्किँदा थियो।
दिनभर मौसम धुम्म थियो, साँझ सिमसिम पानी पर्यो। ठण्डीयाममा काठमाडौंमा पानी परेपछि के चाहिन्थ्यो र, जाडो ह्वात्तै बढिहाल्यो। ममीले खसीको खुट्टाको सुप बनाउनु भएको रहेछ।
सुप र गुन्द्रुकको अचारसँग थपी–थपी भात खाएँ। हिटर तापेर राति अबेरसम्म बाबाममीसँग गफ गरेर बसेँ। केही वर्षपछि सायद आजै होला यति धेरै गफ गरेर बसेको।
एघार बजेतिर बेडमा पुगेको थिएँ, झल्यास्स आयुषको याद आयो। कतै मेल पो पठायो कि भनेर ल्यापटपमा इमेल खोलेँ। नभन्दै आयुषको मेल आएको रहेछ। उत्साहित हुँदै खोलेँ, लेखिएको थियो–
बडो सकसका साथ आज यो लेख्दैछु। लेखौं कि नलेखौं भनेर धेरै दिनरात सोचेपछि अन्ततः लेख्ने निणर्यमा पुगेको छु।
मैले पनि जीवनमा सपना देखेको थिएँ। त्यही सपना पूरा गर्न आफ्नो भूगोलभन्दा धेरै टाढा आएर संर्घष गरिरहेको छु। संर्घषकै बीचमा हाम्रो जीवन जोडियो। जीवनसँगै सपना पनि।
सपना मेरोबाट हाम्रो भएको थियो। सोचेको थिएँ, सपनाले अब प्वाँख हाल्ने छन्। हाम्रो जिन्दगीले नयाँ उडान भर्ने छ। तर दुर्भाग्य, नियतिले पलाउनै आँटेको प्वाँख काटिदियो। हामी जमिनमा नराम्रोसँग पछारियौं।
जुन दिनबाट हाम्रो जीवन जोडियो, त्यही दिनदेखि नै हाम्रो सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो। तिमी हरेक दिन कसैको यादमा टोलाउथ्यौ, हरेक रात उसैको नाममा बर्बराउँथ्यौ।
मलाई यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि कहिल्यै मैले तिमीलाई प्रश्न गरिनँ। तिमीले लुकाएको तिम्रो विगतबारे मैले सबै थाहा पाइसक्दा पनि म चुपचाप नै बसिरहेँ।
म त्यो तीतो सत्यलाई आफैंभित्र दबाउन कोशिस गर्दागर्दै त्यो दिनदेखि असफल भएँ जुन दिन यो कुरा आफन्त, परिवार र साथीभाइलाई समेत थाहा भयो। त्यसपछि मैले हार खाएँ।
यो कुराहरू मैले प्रत्यक्ष तिमीसँगै गर्न सक्थेँ तर डाक्टरले तिम्रो डिप्रेसनको कारण यो कुरा गर्न मलाई रोक लगाएको थियो। अझ मेरो मुखबाट तिमी सामू यस्ता कुरा नगर्न डाक्टरले कडा शब्दमै चेतावनी दिएका थिए। सँगै सुतेको कैयौं रात मैले यो कुरा गर्न नखोजेको होइन। तर सकिनँ। यही कारण म पनि आफ्नो जिन्दगीबाट डग्मगाइसकेँ।
यसरी हाम्रो जीवन कति दिन चल्छ र! खैर, अब हामीले आ–आफ्नै बाटोबाट अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने ठानेको छु।
अन्तमा, मसँग भएको कुरा तिमीलाई के–के चाहिन्छ माग, म दिन तयार छु। म भने तिमीसँग एउटै कुरा माग्छु। त्यो हो डिभोर्स। माफ गर भविशा! आजसम्मको साथको लागि म सधैं ऋणी रहिरने छु। गुड बाई !
मेल पढिसकेपछि संसार नै अन्धकार लाग्यो। सूर्यको प्रकाश, जुनको उज्यालो अब मेरो लागि रहेन। जिन्दगी जिउन सक्छु कि भन्ने आशाको धिपधिपे दीयो पनि झ्याप्पै निभ्यो।
अब त्यो अन्धकार छिचोल्न के कुराले मलाई प्रेरणा दिन सक्थ्यो र ! जिन्दगीले मलाई पटक–पटक पछारिरह्यो। अब त उठ्ने हिम्मत नै गर्न सकिनँ। मसँग एउटै मात्र विकल्प बाँकी छ, महाप्रस्थान।
सोच्दैगर्दा बाआमाको तस्वीर आँखै अगाडि आयो। अन्तिम पटक बिदा मागेँ सधैंको लागि। तत्कालै आयुषलाई रिप्लाई दिएँ– तिमीबाट मलाई केही चाँहिदैन।
मलाई अब यो संसारबाटै केही चाहिँदैन। इमेलसँगै आएको डिभोर्स फर्ममा सिग्नेचर गरेर पठाइदिएँ। आयुषसँग पनि बिदा मागेँ।
विगत केही महिनादेखि लेखिरहेको रातो डायरी सिरानी छेउमै थियो।
आज यसलाई पनि पूर्णता दिएँ। यो डायरी सानो बक्समा र्याप गरेर तिम्रो अफिसको ठेगाना लेखेर छोडिदिने छु। तिमीले यो डायरी पढ्दै गर्दा यो संसारमा मेरो उपस्थिति हुने छैन।
र, अन्तिममा तिमीसँग लुकाएको एउटै कुरा छ, जुन हाम्रो बिहे भएको दिन सुनाउनलाई साँचेकी थिएँ।
तर त्यो दिन आएन, त्यसैले आजै सुनाउँछु– हामी लिभिङ टुगेदरमा बसेको पहिलो हप्ता नै गुहेश्वरी दर्शन गर्दा मैले लुकाएर लगेको सिन्दुर र पोते भगवानको अगाडि तिमीलाई छुवाएर राखेकी थिएँ।
त्यो दिनदेखि त्यो पोते र सिन्दुर सधैं मेरो साथमा थियो। त्यो पनि यो डायरीसँगै तिमीलाई नै फिर्ता गरिदिएकी छु।
मलाई माफ गर भास्कर! आजबाट मैले तिमीसँग अब कहिल्यै नभेट्ने गरी बिदा मागेकी छु।
तिम्रो प्रेमको मीठो अनुभूतिको कथा बोकेर म टा….ढा क्षितिजपारि जाँदैछु।
तिमीलाई कुनै दिन मेरो याद आएमा मा...थि आकाशमा चम्किलो जुनलाई हेर्नू है!
सायद म त्यतै कतै हुनेछु।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १२, २०७६, ०४:१५:००